Stephen King, usoro ihe omuma ya, na mmekorita nke oru ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
M. Scabies | | Akwụkwọ
Ọtụtụ ndị maara Stephen Stephen dị ka nna ukwu nke ụjọ, ma ọ bụ aha ọ bụla ọzọ na-egbu maramara metụtara ụdị akụkọ a. Ma ọ bụghị mmadụ niile maara nke ahụ akwụkwọ akụkọ Maine na-ede akwụkwọ karịrị ọtụtụ ka ha dị. Mgbe mmadu malitere iguta ma ichoputa oru ya, mmadu ghotara uzo di nkpa na nke oma nke di n’etiti otutu aha na ndi ozo, na mgbakwunye na oge ndi ahu nile nke, site n’inwe oganihu di uku ma obu nta, o ghapuru mgbidi nke ano.
Enwere ike ikwu ọtụtụ ihe banyere Eze, mana ọ nweghị onye gọnahụrụ na nwa okorobịa ahụ nwere obi ụtọ ma nwee nnukwu ọchịchọ. Ọ garaghị ebe ọ nọ ma ọ bụrụ na ọ nọghị. Banyere uru ọrụ ya bara, ọ masịrị m ịghara ịtụle isiokwu a, ma ọ bụ opekata mpe na isiokwu a. O zuru ezu ikwu na, agbanyeghị na m ji akwụkwọ ya akpọrọ ihe nke ukwuu, amaara m na ha ezughị oke, ha nwekwara ọkụ na onyunyo ha. Ya mere, anyị ga-elekwasị anya na njirimara metaliterary na mmekorita nke akwukwo ya.
"'A na-akpọ akụkọ ndị ahụ' akụkọ ifo, '" Roland mused.
"Aha," Eddie zara.
"Mana onweghị akụkọ ifo na nke a."
"Ee e," ka Eddie kwetara. Ọ bụ karịa nke otu. N'ime ụwa anyị enwere akụkọ banyere ihe omimi na nkwanye ugwu, akụkọ sayensị, West, fairies ... know maara?
"Ee," ka Roland zara. Ndị mmadụ n’ụwa gị ọ na-ahọrọ ịnụ akụkọ otu otu oge? Na ha anaghị agwakọta ya na anụ ụtọ ndị ọzọ na okpo ọnụ?
"More dị ka ee," ka Susannah kwuru.
"Don't na-adịghị amasị refried?" Jụrụ Roland.
"Mgbe ụfọdụ maka nri anyasị," ka Eddie zaghachi, "mana mgbe a bịara n'ihe banyere ntụrụndụ, anyị na-ewere naanị otu ụtọ ka anyị ghara ikwe ka ụfọdụ ihe gwakọta na ndị ọzọ na efere anyị. Ọ bụ ezie na ọ na-ada ntakịrị ụda mgbe akọwara ya n'ụzọ ahụ. "
Stephen King, "Ọchịchịrị Ọchịchị V: Anụ Ọhịa nke Calla".
Nke mbụ n’ime ihe niile ga-abụ ịkọwa ihe ọ pụtara metaliterature. N’okwu ndị dị mfe, na -enweghị teknụzụ, ọ bụ jiri akwukwo nke mmadu kwuo banyere akwukwo. Ihe e kwuru na usoro ndị a bụ ihe atụ zuru oke, ebe ndị eze na-ede banyere onwe ha na-atụle ụdị edemede dị iche iche, na ịdị mma ma ọ bụ na-agaghị eme ha.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a abụghị ihe na-apụtaghị iche, kama ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ụwa edemede King Stephen. Onye edemede ahụ na-eji ha eme ihe ugboro ugboro iji tụgharịa uche na ọrụ onye edemede, usoro okike, na njirimara pụrụ iche nke akụkọ dịka ụdị ngosipụta nka. Nke ukwuu, na ọbụna onye ode akwukwo n’onwe ya gh’onye ogugu n’ime akwukwo ya, ma puta otutu oge dika “chi” nke amuru uwa ozo n’amaghi ama. Ihe na - abụghị ihe odide ya niile na - ewere nke ọma, na - adị ka pupp na aka ha.
N'akụkụ aka nke ọzọ, mmekorita bụ, n'okwu nke onye nkatọ na onye edemede Gerard mkpụrụ ndụ ihe nketa, «A mmekọrịta nke ọnụnọ n'etiti ederede abụọ ma ọ bụ karịa, ya bụ, eidetically na ugboro ugboro, dị ka ọnụnọ nke otu ederede na ọzọ. » Nke a nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ, mana ugbu a anyị na-ekwu maka mgbe Eze na-ewepụta mmekọrịta, ma ọ bụ na-ekwupụtakwa ọrụ ọzọ ya n'akwụkwọ ya.
Nke a bụ ikpe na Towerlọ Elu Ọchịchịrị, ogidi nke na-egosiputa oru ihe nke onye edemede. Akwụkwọ ọ bụla Stephen King metụtara na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na epic saga, ma obu ihe omuma, ya na ihe ndi ozo, wdg. Iji maa atụ, nna Donald frank callahan (onye ụkọchukwu nwere nsogbu mmanya, na onye na-akwado akwụkwọ akụkọ nke abụọ nke King, Ihe omimi nke Salem, Ọrụ vampiric-themed), pụtara ọzọ, jiri nnukwu ibu na ibé ahụ, na mpịakọta atọ ikpeazụ nke Towerlọ Elu Ọchịchịrị.
Nke a bụ naanị otu ihe atụ dị egwu, mana anyị nwere ike ịgụta ọtụtụ ndị ọzọ: nkọwa banyere onye na-emegide ya Ọ (Nke ahụ), ruo ụlọ 217 nke Ihe na-egbukepụ egbukepụ, ma ọ bụ gịnị Randall ọkọlọtọ (akpọkwara Nwoke no na oji), onye iro nke protagonist nke Towerlọ Elu Ọchịchịrị, Bụrụ onye isi ojii n'azụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke akụkọ Stephen King na-atụ ụjọ. Okwu ndị a enweghị ike ịgụta ọnụ, ha na-eche ka onye na-agụ akwụkwọ mara anya wee chọpụta ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Stephen King, usoro ihe omuma ya, na mmekorita nke oru ya.
Luis otano dijo
Blọọgụ a dị mkpa iji debe akwụkwọ ndị Hispaniki. Ekele na ọtụtụ ihe ịga nke ọma.
Onye isi edemede XN-ARETE PUBLISHERS / MIAMI.
Zaghachi Luis otaño
M. Scabies dijo
I meela nke ukwuu Luis! Ọ masịrị m na ị masịrị ya.
Zaghachi M. Escabias
Ihe mere anyị ji ede. Pathzọ na-ejighị n'aka nke onye edemede.